Wmv Free in Converter MP4 for Windows 8
> Resource > Video > Free wmv Player for Windows 8: Play wmv si habsami leh oo fudud loo Fayl
Wmv, loogu talagalay by Miscrosoft, waa mid ka mid ah qaabab video inta badan la isticmaalo. Dad badan oo soo bixi ama geeyo on videos internet-ka ayaa inta badan lagu arkaa .WMV kordhin. Fursadda in aad ku guuldareystay inuu u ciyaaro gaar ah wmv files, gaar ahaan ka dib markii lagu casriyeeyo si Windows 8. In artile this, 3 ciyaartoy wmv fudud oo la gaari karo u Windows, Mac, qalabka la qaadi karo waxaa lagu la wadaago idinla.
1. wmv ciyaaryahan: Wondershare Video Player
Wondershare Video Free Player (Windows 8/7 / XP / Vista taageeray) siinayaa taageero fiican oo loo maqli karo ee wmv files leh ma codec wmv for Windows rakibay (HD wmv ka mid ah). Ka sokow ciyaaro wmv video, waxa ay dhab ahaantii u ciyaara tan oo ah qaabab kale video, oo ay ku jiraan DVD, ISO, MKV, AVI, MOV, MPEG, MTS, iyo in ka badan. Iyada oo ilaa GPU xawaaraha, aad ku raaxaysato kartaa filimada HD ugu dambeeyay si degdeg ah iyada oo aan wax dhibaato ah. Ma doonaysaa in aad soo bandhigaan kaliya subtitles sida aad doonayso inaad ka tiro ka mid ah doorashada? Just xaq guji oo ay doortaan. Waxaa xitaa kuu ogolaanayaa inaad loading subtitles kale ee .ass, .ssa, qaabab .srt iyo astaysto ay font. size, iyo jagada.
2. wmv ciyaaryahan Windows 8: Windows Media Player
Si aad u ciyaaro wmv, qaab AVI ee PC Windows ama qalabka Windows ku salaysan, Windows Media Player waa la shaki ku jirin ciyaaryahanka ugu fiican warbaahinta. Waxay leedahay waxyaalo badan unmatchable. Waxa ay taageertaa loo maqli karo deegaanka, hoorto loo maqli durdurro multicast iyo horumar downloads. Items in playlist la boodayo kara si ku meelgaar ah waqtiga loo maqli karo aan laga saaro playlist ah. Howlgal keyboard-ku-saleysan Full waxaa suurtagal ah in ciyaaryahanka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira fursad laga yaabaa in aad ku guul darreysato inay ku ciyaaraan files gaar ah wmv la WMP iyo aad aragto si loo soo dajiyo ee codecs loo baahan yahay. Tani waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay codec gudaha ma garan karo si aad u Windows Media Player. Waxaad ka eegi kartaa iyo rakibi WMP version lastest in dhibta dhibaatada, ama raadin qaar ka mid ah pack codec sida K-lite codecs .
3. wmv ciyaaryahan Mac: ciyaaryahan QuickTime la Flip4mac wmv
Users Mac ma ku raaxaysan buuxa dhaw raaxadeeda waxa u ciyaaro wmv video ay ciyaaryahanka QuickTime gundhig, sababta oo kaliya taageeraa MOV, MP4, M4V encoded by Apple Inc. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dhinac saddexaad oo la odhan jiray Telestream horumariyo Flip4mac wmv inay hareer ka xadaynta. Iyada oo qayb ka QuickTime this, waxaad ka ciyaari kartaa files wmv iyo WMA labada toos ah la isticmaalayo QuickTime Player iyo watch huleeshay wmv videos.
Haddii kale, waxaad isku dayi kartaa qaar ka mid ah ciyaaryahan kale oo wmv awood badan haddii weli ma kala qaadi karaan faylasha wmv. tusaale VLC Media Player , MplayerOSX , iwm
Intaa waxaa dheer, haddii aad rabto in aad si loogu badalo files wmv si ay u ciyaaro qalabka kala duwan ee la qaadi karo sida iPhone, iPod, iPad, Apple TV, HTC, Samsung, iwm, waxaad isticmaali karaan Converter a free video sida Wondershare Free Video Converter.
Download Free Video Converter (Windows 8 taageeray):
Top 3 AVI Players u Mac (Yosemite & Mavericks ka mid ah)
Sidee Hoose Volume faylasha Warbaahinta
Ku dar-guur Gaarka ah iyo Raadka in Videos